Maraykanka Oo Mamnuucay Badeecado Uga Yimaadda 74 Dal Oo Ku Shaqaysta Carruurta, Maxaabiista Iyo Addoonta - Wargane News
Home Somali News Maraykanka Oo Mamnuucay Badeecado Uga Yimaadda 74 Dal Oo Ku Shaqaysta Carruurta,...
Maraykanka Oo Mamnuucay Badeecado Uga Yimaadda 74 Dal Oo Ku Shaqaysta Carruurta, Maxaabiista Iyo Addoonta
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barak Obama ayaa saxeexay sharci mamnuucaya in dalkiisa loo soo dhoofiyo wax-soo-saarka warshadaha ay ka shaqeeyaan dad la qasbay, addoon ama carruur. Tallaabadan oo lagu tilmaamay mawqif adag oo ay dowladda Maraykan ka taagan tahay shaqaalaha addoonta ah ama qasabka ku shaqeeya.
Warkan oo uu Geeska Afrika ka soo xigtay Shabakadda Wararka ABC News ee dalka Maraykanka ayaa sheegaya in Arbacadii toddobaadkii ina dhaafay 24kii Feebarweri uu Obama saxeexay sharcigan xambaarsan liis dheer oo ah badeecado warshadaha soo saaraa ku shaqaystaan maxaabiist dembiyo xabsiyada ugu xidhan, shaqaale la qasbay, dad deyn lagu leeyahay shaqo loogu beddelay ama dad dal-ku-gal la siiyey awgii lagu qasbo in muddo cayiman ay shaqeeyaan iyo dad si toos ah loo addoonsado.
Marka uu sharcigani dhaqangal noqdo 15 maalmood gudahood waxaa si buuxda u joogsan doonta in dalka Maraykanka la soo geliyo 136 nooc oo ah badeecado kala duwan oo looga soo dhoofin jiray 74 waddan oo dunida ah, waxaana ka mid ah dharka laga keeno dalka Argentina oo warshadaha soo saaraa ay shaqaale u adeegsadaan carruur iyo dad addoon ah. Dahabka iyo Cudbiga laga keeno dalka Burkina Faso; Qalabka korontada, qalabka carruurtu ku ciyaarto iyo labanka guryaha lagu dhiso oo dalka Shiinuhu u dhoofiyo Maraykanka; Bunka oo laga keeno dalka Ivory Coast iyo Harqadda/waaraadka dharka laga tolo oo dalka Itoobiya u dhoofiyo Maraykanka. Badeecadahan oo dhammaantood ku jiray liis ay sannadkii 2014ka soo saartay wasaaradda Shaqada ee Maraykanka oo lagu diiwaangeliyey wax-soo-saarka loo adeegsado shaqaalaha carruurta ah ama la qasbo.
Waxa kale oo liiskaas ku jira dalal ay ka mid yihiin, Brazil oo hilibka, dhuxusha, samaynta kabbaha, marmarka, bariiska iyo alaabooyin kale u adeegsata shaqaale carruur ah ama dad addoon ah. Dalka Chad oo lo’ada addoon u adeegsada, Shiinaha oo badeecooyinka aynu kor ku soo xusnay ay u dheer tahay, dhuxusha, ubaxa sinaaciga ah, dharka, masaabiirta, qalabka carruurtu ku ciyaarto iyo badeecado kale. Masar oo addoon iyo carruur u adeegsata soo saarista cudbiga iyo dhagaxa guryaha lagu dhiso. Dalka Itoobiya oo dunta iyo waaraadka gacanta lagu tolo oo carruur iyo addoon lagu shaqaalaysiiyo ay u dheer tahay dahabka iyo lo’da oo carruurta loo adeegsado. Iyo dalka Kenya oo carruur u adeegsada wax-soo-saarka Bunka, Kalluunka, Qaadka Miirooga, Buuriga, Sonkorta iyo Bariiska
Sida ay haayadda shaqaalaha adduunku hore u sheegtay qiyaas ah boqolkiiba 30 carruurta dalka Bangladesh ayaa ah shaqaale. Wasaaradda Shaqaalaha Maraykankuna waxa ay aaminsan tahay in wax-soo-saarka ugu badan ee carruurta iyo addoonta loo adeegsadaa ay yihiin, cudbiga, Sonkorta, Buuriga, Bunka, Lo’da, Saanta, Alkoosha iyo Kalluunka. Warbixin ay soo saartayna waxa ay ku sheegtay in warshadaha iyo ganacsatada shaqaalaha qasabka ah iyo addoonta adeegsadaa ay sannad kasta helaan faa’iido sharci darro ah oo gaadhaysa illaa 150 Bilyan oo doolarka Maraykanka ah.
Somaliland: Suldaan Guud Ee Beelaha Arab Oo Ka Hadley Colaada Ka Jirta Ceel-afweyn, Farriin Waayeelnima U Diray Saladiinta Isu Jawaabtay
SOMALILAND: Guddida Jidka Ceerigaabo Oo Sharaxay Halka Dhismaha Waddadu marayso iyo Xaddiga Lacagaha Ay Hayaan
Deg Deg: Cali Gurey Oo Golaha Wakiilada Iyo Maxamuud Xaashi Iyo Cali Mareexaan Kabaha La Dul-Maray “Xeerkii Hore Tuur Ku Danbana Diid”
Somaliland: WADDANI Oo Madaxweynaha U Gudbinaya Magacyada Masuuliyiin Ay Ku Eedeeyeen Shirqoollo Warbaahineed Oo Xidhiidhsan Hargeysa Illaa Nairobi & KULMIYE Oo Ku Xusan